Madaraso diini ah oo ku taalla wadanka Ingiriiska oo la weeraray. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Madaraso diini ah oo ku taalla wadanka Ingiriiska oo la weeraray.
On Mar 30, 2019 1,069 0
Kooxo cunsuriyiin ah ayaa weerar ku qaaday madaraso lagu barto diinta Islaamka oo ku taalla wuqooyiga wadanka Ingiriiska, halkaas oo wax lagu baro ardeyda muslimiinta.
Madarasada la weeraray waxay ku taallaa magaalada New castle ee wuqooyiga Ingiriiska, waxaana kooxaha weerarka geystay ay jeex jeexeen kutubo Quraan oo yaalay madarasada, iyagoo sidoo kale burburiyay qeybo kamid ah dhismaha madarasada.
Maamulaha madarasada oo la hadlay wakaaladda wararka ee Anaadool ayaa shaaca ka qaaday In ugu yaraan 6 qof ay soo weerareen madarasada, ayna bansiin ku shubeen madarasada, kadibna ay jeex jeexeen oo ay gubeen kutubta Quraanka kariimka.
Kooxda weerarka cunsuriga ah ku qaaday madarasada ayaa ka baxsaday goobta, waxaana warar la helay ay sheegayaan in ciidamada Police-ka ay goor dambe gacanta ku dhigeen.
Waa weerarkii labaad oo muda labo bilood gudahood lagu qaado madarasadan lagu barto diinta Islaamka oo ah madarasada keliya ee ka furan wuqooyiga dalka Ingiriiska.
Arintan ayaa kusoo aadeysa, iyadoo ay sii kordheen naceybka ka dhanka ah muslimiinta Yurub, waxaana sidoo kale uu weerarkan imaanayaa, iyadoo labo masjid oo ku yaala New Zealand lagu dilay 50 qof oo muslimiin ah, kadib markii nin gaal ah uu weeraray iyagoo tukanaya salaadda Jimcaha.